Vivo kwadoro batrị 4500 mAh nke iQOO Pro 5G ga-enwe | Gam akporosis
El iQOO Pro 5G de Vivo na-ezuru uche niile, banyere ozi metụtara ya na ụlọ ọrụ abụọ a. A ga-eji ọkwa a nwee ọtụtụ nkọwa nkọwa kachasị elu anyị nwere ike ịchọta n'ahịa, yabụ ọ ga-abụ nnukwu ama nke ndị ọzọ. ọkọlọtọ site na ụlọ ọrụ dịka Xiaomi, Samsung, Huawei na ndị nrụpụta ndị ọzọ.
Na nso nso a, Vivo ekpugherela akwụkwọ ozi ọhụrụ -so tere- nke ekwentị a. Site na nke a nkwado ihe, na emeputa ayarade na ga - egosipụta batrị 4,5000 mAh buru ibu.
El iQOO mbụ, ihe nlereanya mbụ nke pụtara obere oge ụdị iQOO nke Vivo ekwuputara na February, emere ya oji batrị 4,000 mAh. Ngwaọrụ ọhụrụ a, nke dị nso ịmalite ya, na-anọchite anya mmelite na ngalaba nnwere onwe. N'ihi ya, ọ gaghị adị mkpa ịgba ụgwọ ugboro ugboro dị ka ọdụ ahụ anyị kwuburu, nke na-ekwu zuru oke ebe 4,000 mAh adịghị njọ ma ọlị.
Ike milliamp dị otú ahụ ga-abụ ihe kwesịrị nkwado maka teknụzụ na-ebu ngwa ngwa, mana a ga-amata ọnụ ọgụgụ watatt maka nke a. Otú ọ dị, atụmanya na-adabere na a 44W ụgwọ ngwa ngwa, nke ga-akwụ ụgwọ ekwentị ahụ site na 50% naanị na 16 nkeji.
IQOO Pro 5G ga-ebido na August 22 na-abịa na ikpo okwu mkpanaka Snapdragon 855 Plus nke 7 nanometers ma na-atụ anya na ọ ga-abụkwa ụdị Vivo mbụ nwere njikọ 5G, yana ịbịarute ihuenyo Super AMOLED FHD + nke 6.41-inch nke nwere nyocha mkpịsị aka jikọtara onwe ya, RAM nke 8 na 12 GB na nchekwa dị n'ime. ohere nke 128, 256 na 512 GB. Igwefoto n'ihu nke ama a ga-abụ 12 MP, ebe modul igwefoto ya ga-abụ 48 MP + 12 MP + 3 MP.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Vivo kwadoro batrị 4500 mAh nke iQOO Pro 5G ga-enwe
Huawei ga -eweta iko AR ya na VR ya n’ime IFA 2019